Wararka Maanta: Talaado, Apr 30, 2013-Ciidamada Puntand oo duleedka Degmada Boosaaso ku toogtay 13 ruux oo la sheegay inay Al-shabaab ka tirsanaayeen
Dhallinyarada la toogtay ayaa qaarkood waxay maxkamadda ciidamadu ku ridday xukunno dil ah, iyadoo kuwa kalena al sheegay inaan wax xukunno ah lagu ridin, waxanaa goobta ay toogasho ka dhacday ku sugnaa saraakiil ka tisran kuwa ciidamada Puntland.
Warbaahinta ayaa loo diiday inay goobta tagaan, waxaana ammaanka goobta sugayay ciidammo ka tirsan kuwa milateriga iyo kuwa badda Puntland, iyadoo toogashadu ay ku dhacday si saf-mar ah.
Dadka la toogtay ee lagu eedeeyay inay Al-shabaab ka tirsanaayeen kuwaas oo qirtay inay ka dambeeyeen dilkii Dr. Axmed Sheekh C/raxmaan ayaa kala ahaa:
Axmed Maxamed Cali oo 18-jir ahaa.
Maxamed Abshir Cartan oo 20-jir ahaa.
Cabdiraxmaan Maxamed Cali oo 28-jir ahaa.
Cabdiqani Nuur Maxamed (Qorane) oo 23-jir ahaa.
Ruqiyo Xasan Maxamed Yuusuf oo 25-jir ahayd.
Maxamed Maxamuud Saacadoole oo aan da’diisa la sheegin.
Xeer ilaaliyaha maxkamadda ciidamada Puntland, C/kariin Xasan Firdhiye oo ka hadlay dilka ayaa sheegay in askari ka tirsan ciidamada Puntland uu ku dhintay goobta ay toogashadu ka dhacday, kaddib markii ay ku dhacday rasaas ka mid ah kuwii lagu dilayay 13-ka qof ee la sheegay inay Al-shabaab ka tirsanaayeen.
Dad qariyay magacyadooda oo la hadlay warbaahinta ayaa sheegay in dadkan xalay lagala baxay xabsiga magaalada Boosaaso saakayna si saf-ballaaran ah loogu toogtay duleedka magaalada Boosaaso, waxaana uu dilkan noqonayaa kii ugu ugu horreeyay noociisa oo laga fuliyo Puntland.
Ma jiraan sawirro laga qaaday dadka la dilay, marka laga reebo sawirro laga qaaday dadka lagu helay inay dileen Dr. Sheekh Axmed C/raxmaan xilligii ay maxkamada darajada koowaad ee ciidamada Puntland ay xukunka ku ridday 27-kii Feberaayo sannadkan.